zvisarudzo, zvigadzirwa, uye zvivako, asi mamwe mabasa haabatsiri chinhu. Nzvimbo yekutsvaga mapepa atakakurukura pano haisi yakaoma kwazvo, uye inogona nyore nyore kuwandisa nhamba yakawanda yemasiti nema blogs. Ichokwadi kuti mune zvakawanda zvekuchera mapurogiramu, asi zvinotevera ndezve freeware uye zvichazadzisa bhizimisi rako zvido - best networking companies.
CloudScrape is browser-based web scraper uye mhariri yepaIndaneti inobatsira kunyora deta yakawanda pasina dambudziko. Inotipa nzvimbo yekuchengetedza dheta pane dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza mapuratifomu akadai seBhokisi.net neGoogle Drive..Iwe unogonawo kuchengetedza deta yako nenzira yeCSV neJSON. Ndiyo imwe yakasimba uye yakazara cloud-scraping services paIndaneti inobatsira kufamba kuburikidza newemasayiti, inozadza mafomu, inovaka mabhoti uye zvinyorwa zvenguva chaiyo data.
The Visual Web Ripper ndiyo inogadzirisa matanho ezvinyorwa web scraping kubviswa, uye kubvurwa kwewebhu. Icho chimwe chezvinhu zvakasimba zvikuru zvewebhu webadhadhareji paIndaneti. Iyo shandura inounganidza dhidhiyo mumazita maviri uye mufananidzo fomu. Icho chinogadzirisa dheti kubva pane zvaunoda uye zvabuda zvacho nguva dzose zvinokosha uye zvinobatsira.